2010: Sifee, Shakhsiyee, Kor u Qaad | Martech Zone
Waxaa nagu buuxsamay macluumaad ka yimid baraha bulshada, raadinta iyo sanduuqayaga. Qiyaasta ayaa sii kordheysa. Wax aan ka yarayn 100 sharci oo ku jira sanduuqa sanduuqa si aan ugu maro marinnada farriimaha iyo digniinta si habboon. Jadwalkayga ayaa iswaafajiya inta udhaxeysa Blackberry-ga, iCal, Kalandarka Google iyo Tungle. Waxaan haystaa Google Voice si loo maareeyo wicitaanada ganacsiga, iyo YouMail si aan ula qabsado wicitaanada tooska ah ee taleefankayga.
Joe Hall wuxuu qoray maanta walaacyada asturnaanta iyo isticmaalka xogta shakhsiga ah ee Google waxay u horseedi kartaa is-baabi'in. Waan jeclahay qoraalada Joe laakiin kuma raacsani tan qalbi furan. Markaan sii wado isticmaalka Google, waxaan rabaa inay ka faa'iideystaan ​​xog kasta oo ugu dambeysa si ay i siiyaan jawaab toos ah oo shaqsiyan aniga la ii bartilmaameedsanayo. Ma doonayo inaan ku wareego natiijooyinka… i sii jawaabta aan u baahanahay.
Twitter-ka ayaa noqonaya mid aan la maareyn karin… waxaa jira shirkado aad u tiro badan, asxaabteyda, xirfadlayaal iyo adeegyo aan doonayo inaan raaco laakiin qulqulka macluumaadka ayaa hada ah xabad gubasho. Mahadsanid, Feedera tan waxaan u aqoonsaday inay tahay fursad… marka waan ka bixi karaa tan:
Saadaashayda sanadka 2010 ayaa ah in wax soo saarku uu ku xiran yahay intaas filter, tayadoodii iyo shakhsi ahaan wuxuu noqon doonaa xanaaqa. Hoosudhaca hoos u dhaca shirkadaha ayaa riixaya shaqo dheeri ah oo ku saabsan ilaha ugu yar. Wax soo saarkeenu waa inuu kordhaa, haddii aan aaminsanahay inaan karti leenahay iyo in kale.
Facebook iyo LinkedIn ayaa soo guuriyey qaabka nololeed ee Twitter-ka ee tabinta wararka. Blackberry waxay kudayanaysaa khibradan taleefankayga oo leh cod, emayl iyo facebook. Intaan jeclahay Mac-ga oo aan jeclahay sida quruxda badan ee is-dhexgalka iPhone-ka uu yahay, culeyskeyga shaqadu wuu sii kordhayaa. Uma baahni qurux… Waxaan u baahanahay wax soo saar. Iskuxirida isgaarsiinta ayaa caawisay 2009, laakiin hadda gacantooda ayay ka baxeen waxaanan u baahanahay caawimaad ku soo jajabinta googo'yo aniga shaqsiyan aniga khuseeya.
Toddobaadkan, waxaan bilaabay inaan la shaqeeyo ChaCha. Waagii hore, maan adeegsan adeeggooda; si kastaba ha noqotee, hadda waxaan kudarey 242242 buuga cinwaankeyga si aan ugu qoro su'aalaha uguna soo celiyo hal jawaab oo laxiriira. Waxaa jira qanacsanaan durba… inta aan wado waxaan weydiin karaa cinwaanka, lambarka taleefanka, saacadaha dukaamada, iwm. Maaha inaan baaro, shaandheeyo, ka dibna marin websaydh ah. Kaliya waxaan ubaahanahay jawaabta… hal jawaab.
Kaligay maahan Kobaca su'aalaha muhiimka ah, ee faahfaahsan ayaa si dhakhso leh ugu sii kordhaya Google sidoo kale. Waxaan rumeysanahay in isbeddelka raadintu uu ku sii socon doono jihadaan - iyadoo la adeegsanayo adeegyo lagu kala saarayo natiijada ugu wanaagsan oo noqonaysa mid qiimo leh.
Natiijo ahaan, saadaasheyda sanadka 2010 waxay noqon doontaa tiro badan oo qalab aan caadi aheyn kor u kaca si ay uga caawiso ganacsiyada iyo macaamiisha inay shaandheeyaan, u hagaajiyaan oo ay shakhsiyeeyaan khibradooda internetka. Tani waa dharbaaxo kale oo ku dhacday Suuqleyda - waxay ka dhigan tahay in fariintoodu ay tahay inay noqoto dheeraad ah khuseeya, waqtiga ku habboon, oo muhiim ah… haddii kale waa la sifeeyaa.
Tags: 2010kalandarkaiswaafajinta jadwalkafiltercodka googlehoolka joetayadoodiishakhsi ahaanSaadaalintaemail
Maxaad Kahelaysaa Mashiinnada Goobista?
12, 2009 at 8: 52 PM
13, 2009 at 8: 38 AM
Waxaan gabi ahaanba ku raacsanahay in Twitter uu si fudud u noqon karo mid aan la maarayn karin iyo in ay jirto mustaqbal ifaya oo qalab sida kan halkan lagaga hadlay.